I-imeyile igqithisile kusetyenziso oluqhelekileyo lwee-eNewsletters kwaye luthabath 'unyawo kwihlabathi lezentengiselwano. Endaweni yokubonelela 'ngomnyhadala' we-imeyile oyithumelayo ngoku ibangelwe njengenxalenye yesicwangciso-qhinga sentengiso esipheleleyo sokugcina abasebenzisi kunye nokugcina bexhunyiwe kwintengiso yabo, kwinethiwekhi yabo, kwiibhlog abazifundileyo, njl.
Iinkampani sele ziqala ukusebenzisa iMicroblogging, kodwa siza kubona ukuthengiswa kweMicroblogging ngo-2008. Siza kubona amaqela angcono kwi-blog-blogging… kakhulu njengamagumbi okuncokola aguquke kwizicelo zencoko zoluntu kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
Iindawo zokubhukisha ezinje nge Digg zilahlwa kwiindawo ezinje Umxubex - apho ungacwangcisa khona amaqela amaMicrosoft ukuze ujoyine. Ndingakhuthaza wonke umntu ofunda ibhlog yam ukuba anxibelelane nam ngesimemo seQela lokuThengisa kwi-Intanethi ukuze sabelane ngezixhumanisi. Ezinye izicelo ezinje ngeTruemors ziya kuqhubeka nokuvela ngokujolisa kokujolisa endaweni yokuchongwa kwangaphambili.